Blog - SOMALI BELIEVERS FELLOWSHIP
Arrinta Kaniisadda Hargeysa!
Qore: Abdi Duale
​Qaylo dhaan ayaa maalmahanba Soomaalida ka dhex taagneyd, kaddib markii ay gabadh Kaatolig ahi shir ka dhex sheegtay inay Kaniisadda Hargeysa ku lug leedahahay. Marka laga soo tago dooda ah haddii Masiixiyiintu xaq u leeyihiin inay waddan Muslin ah goob caabudaad ka dhistaan iyo in kale, iyo xadiisyo/aayado soo daliilinta, waxay ila noqotay in aniga oo Soomaali Masiixi ah, aadna ugu dhuun daloola Masiixiyiinta Soomaaliyeed, aan runta ka sheego xidhiidhka annaga iyo kaniisaddan naga dhexeeya.
Diyaargarow mise “Insha Allah”?
​Dhibaatooyin badan oo Soomaalida ku dhacaa waxay ku sallaysan yihiin sida ay dhaqan ahaan u fekeraan. Abaar weyn sida ta hadda jirta ah ayaa dhacaysa taas oo dad iyo xoolloba baabi’inaysa, haddana waxaa ka daba imaanaya roobab, laakiinse waxaad maqlaysaa inuu roobkiina dad badan qaaday, daacuun biyood dhaliyey, ama uu nabaad guur keenay. Dad badan baa u dhammaanaya cudur si yar looga hortegi karo ama loo daaweyn karo, waxaad maqlaysaa “toodii baa dhammaatay.”
Arrin Ilaahay qofka u siiyey aqoon, awood, iyo wakhti uu wax kaga qabto ayuu ku odhanayaa “Inshaa-allaah”. Taas macnaheedu waxa weeye laga yaabee inaan hawshaa qabto ama aanan qaban, si kasta aan sameeyee Ilaah baa qoray! Hab fikirka noocan ahi wuxuu Soomaalida baday inay xamilaan nolosha oo ay ka dhacaan, aafooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay iyagu isu keeneenba, halka ay dadyowga kale ku dadaalaan inay dhibaatooyinka soo mara ka gaashaantaan inaanay ku soo noqnoqon.
﻿Siddeed Arrimood oo Ciise Masiix inaga Barayo Qaxootiga
​Muran badan ayaa maalmahan ka taagan qaxootiga. Waddamada reer Galbeedku waa meelaha keliya ee qaxootiga ugu badani ka dhisan karaan nolol nabad, horumar, iyo ciso leh. Laakiinse, waxay u muuqataa inay meelahaas ka soo baxayaan xisbiyo iyo madax ka soo horjeeda qaxootiga guud ahaan, iyaga oo gaar ahaan shaki weyn kasii qaba qaxootiga Muslimiinta ah. Tani waxay aad saamayn ugu yeelanaysaa Soomaalida. Haddaynu Masiixiyiin Soomaaliyeed nahay waa waajib ina saaran inaynu ka hadallo inaanay go'aanadan cusubi ku dhisnayn waxbariddii Ciise Masiix, oo aan gaar ahaan si firfircoon uga qayb qaadano inaan diin ahaan iyo dhalasho ahaanba lagu faquuqin dadkeena Soomaaliyeed ee mudada dheer dhibaatadu haysatey.
Sannad Cusub, Bilow Cusub!
​Dad badani waxay bilowga sannadka gaadhaan go'aano cusub oo ay ku doonayaan inay noloshooda ku beddelaan (New Year's Resolutions), in kasta oo aanay qorshayaashaas intooda badan u hirgelin. Qof wuxuu odhan karaa, sannadkan cunidda qaadka, sigaarka ama balwadda guud ahaan baan joojinayaa, mid kale ayaa odhan kara aad baan u shaqaysanayaa oo lacag ban dhiganayaa, xirfad cusub baan baranayaa, waxan iyo waxaas kale baan samayn doonaa, iwm.
Muslimiin Badan oo Masiixiiyiin Noqanaya
Qore: Bassam Michael Madany
Marka aynu eegno waxyaalaha ay warbaahintu ka qorto adduunka islaamka, waxaa inaga yaabinaya badnaanta inta dagaal ee meelahaas ka ololaya!
Iyadoo lagu jiro wakhti magaalada Mosul laga xoraynayo gacanta Daacish, dadkii qaarkood magaalada way ka baxsadeen, laakiinse kuwo badan ayaa weli meeshaas jooga. Waxaa laga baqayaa in marka la gaadho maalmaha ugu dambeeya ee dagaalka, ay Daacish shicibkaa ka dhigato "dhufays bini'aadan ah." Siiriyana, waxaa dhakafaar inagu ridey sida uu dagaalka magaalada Aleppo ka socdaa u kulul yahay. Dagaal sokeeye oo kale ayaa isaguna ka ololaya Yaman, halkaas oo xoogagga Suniyiinta iyo Shiicadu isku dagaalayaan, oo tirada dhimashaduna maalin kasta way sii kordheysaa uun.
​Laakiinse, dhacdooyinka kor xusani maaha kuwa keliya ee ka dhacaya adduunka Islaamka. Waxaa dhici karta inay kuwo badan kaga yaabiso arrin cusub oo si aamusan ama hoose muddoba u socotey: "Soo badashada dadka Islaamka ka baxaya ee Masiixiga noqonaya."
JOOJINTA QAADKA EE SOOMAALIYA﻿
Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan go'aan aad loogu baahnaa oo loo bogey ka qaadatay qaadka, oo ay ku dhawaaqday in Soomaaliya laga joojinayo laga bilaabo 6-dii Sebteembar 2016. Baadhitaan ay sameeyeen dad ku xeeldheer arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo caafimaadkuba waxay isku raaceen inuu qaadku Soomaaliya ku yahay "social epidemic" ama sidii cudur bulsheed dhakhso u faafa.
﻿MASIIXIYIINTA SOOMAALIDA IYO HAY'ADDA CULIMADA SOOMAALIYEED!
"Masiixiyiinta Soomaaliyeed laaya, dila, qoorta ka gooya..." Erayadan waxaa dhowaan ku dhawaaqay Sheekh ka mid kuwa ugu sarreeya Hay'adda Culimada Soomaaliyeed. Odhaahdan nacaybka badani ka muuqdo waxaa Shiikha ka keenay kaddib markii ay tobaneeyo Masiixiyiinta Soomaaliyeed ahi ku dhiiradeen inay rumaysigooda qirtaan oo ay markhaatifurkooda soo dhigaan baraha warbaahinta.
﻿KIINEE DHAGAXA UGU HORREEYA KU TUURAYA?
Qalbi xanuun weyn baa kugu dhacaya marka aad aragtid xaqdarrooyinka badan ee bini'aadanku isku hayo, haddana kuwan qaarkood ayaa adiga si gaar ah kuu sii taabanaya, oo muddo dheer niyaddaada ka sii gubanaya, kuguna khasbaya inaad isku daydo inaad wax ka tidhaahdo, gaar ahaan marka caddaalad daradaa lagu sameeyey iyada oo magaca Ilaahay la isticmalaayo.
KA DIGTOONAADA AFLAGAADEYNTA DIIMAHA KALE
"Haddii mid isu maleeyo inuu cibaado badan yahay, oo uusan afkiisa xakamayn, laakiin uu qalbigiisa khiyaaneeyo, kaas cibaadadiisu waa wax aan waxtar lahayn." (Yacquub 1:26).
Waxaa maalmahan aad loo hadal hayaa dhacdooyinkii ka dhacay Paris, iyo dilkii loo geystey joornaaliistayaashii Charlie Hebdo. Dhacdadani waxay tooshka ku qabatay su'aal hore u jirtey oo ah, "Ma saxsan tahay in diimaha dadka kale la aflagaadeeyo?" Anigu haddaan Masiixi ahay waxaan is weydiinayaa, "Ma saxsan tahay inay Masiixiyiintu diimaha dadka kale aflagaadeeyaan?" Jawaabta su'aashanina waa MAYA.